Iimpembelelo kubaLindi boKhuseleko abasebenzisa iikhamera zomzimba-zomzimba | Izisombululo ze-OMG
E-Asia, indawo apho amapolisa enxiba iikhamera zemizimba yanda ngokukhawuleza ukuze kuncitshiswe ubundlobongela phakathi kwamapolisa nabahlali. Kukholelwa ngokubanzi ukuba ukusasazeka kwetekhnoloji yomzimba wekhamera kuya kucacisa uxanduva lwamagosa asebupoliseni, ngokwenza njalo ukuphucula ukhuseleko lwabemi. Nangona kunjalo, kukho idatha encinci kakhulu enokuthi isetyenziswe njengesiseko sokuphucula ukhuseleko.
Amapolisa akholelwa ekubeni le khamera inxitywe ngumzimba inokubuphucula ubuchule bamapolisa ekukhangelo nasekuphuculeni ukungafihlisi noxanduva lokuphendula kwimisebenzi yamapolisa. Amanye amapolisa axhotyiswe ngekhamera enxibe umzimba ukuvavanya ukusebenza kwawo. Iqela lamapolisa livakalise ukoneliseka ziziphumo zovavanyo kuba imifanekiso ethathwe yikhamera enxibe umzimba ichane ngakumbi kunentetho yomlomo.
Abanye abantu bacinga ukuba le khamera inxibe umzimba inokwenza amagosa asebupoliseni ukuba akhangele ngendlela ethe kratya, enika ingxelo kunye neselubala, ngokwenjenjalo ephucula ukusebenza komthetho. Nangona kunjalo, amanye amaLungu akhathazekile ekubeni amagosa asebupoliseni enokuthi athathe isigqibo "sokuba arekhode okanye angarekhoda nini kwaye aqale nini ukurekhoda" kwaye namapolisa ngokwawo angarekhodwa, ikhamera enxibe umzimba ayinakho ukuveza isiganeko ngokubanzi nangokufanelekileyo. Ikhamera enxibe umzimba inokuqokelela ulwazi kunye nedatha kunokuba iyimfuneko kunyanzeliso lomthetho, iphakamise inkxalabo malunga nemicimbi yokhuselo lwabucala.
Ukhuseleko ngakumbi kubemi kunye namapolisa?
Kwangoko, ii-Cams zomzimba ziye zavavanywa yimibutho yokunyanzelwa komthetho. Ukuphatha kufuneka kukhangelwe kwaye ukuba iteknoloji sele ikhulile. Kodwa yintoni kanye kanye ekufuneka yenziwe ziikhamera zomzimba? Sijonga itekhnoloji entsha kwi-engile ekhethekileyo.
Iinqanawa zomzimba kufuneka zikhusele amapolisa kuhlaselo
Ukuhlolwa kwevidiyo ngoku isetyenziswa ngokubanzi kwipropathi yabucala ukukhusela impahla kwizaphuli mthetho. Logama amacandelo emifanekiso abonisa kuphela indawo eyimfihlo, ukusetyenziswa kuvunyelwe. Ukuhlolwa kwevidiyo kwiindawo zikawonkewonke, kukho izithintelo ezinkulu, ezinyanzelise iBhunga laseburhulumenteni ukuba lithathe isigqibo malunga nokusetyenziswa kweekhamera zomzimba.
Amapolisa anxibe ikhamera anokubonwa ngokumakisha ngombhalo "Ukurekhodwa kwevidiyo". Nangona kunjalo, iikhamera azihambi ngokusisigxina. Kuphela kwimeko yongquzulwano oluzayo, iikhamera zivuliwe ngamagosa.
Kwangelo xesha, abaxhasi bale teknoloji intsha yezokhuseleko bagxininisa ukuba iikhamera akufuneki zikhusele kuphela ipolisa. Ukusukela ngokufuthi ubundlobongela obenziwa ngamapolisa ngokuxeliweyo kukhankanyiweyo, iikhamera kufuneka zisetyenziswe kwimeko yokutyholwa ngamapolisa enkundleni njengobungqina. Kuyenzeka ukuba ujonge ukuba ngaba amagosa ayengaphandle kwesakhelo esiqhelekileyo.
Ngaba le mpembelelo ilindelwe ngabantu abaphetheyo ekusebenziseni iiCams zomzimba?
Ubundlobongela kunye nokungahloniphi amapolisa kufuneka kubekhona
Iimpawu zomzimba kufuneka zibe nesithintelo esithintelayo kwabo banokuba ngaboni abona banobundlobongela
Ngexesha likaxakeka, ukurekhodwa kwevidiyo kwiimbambano zomthetho kufuneka kwenziwe njengobungqina
Iimoto-mzimba kufuneka zikhuphe uxinzelelo lokuthotyelwa kunye namagosa asebupoliseni, okubenza baziphathe kakuhle
Ngokubanzi, ngokusekelwe kumava endawo nawaphesheya, ukubekwa kweliso kwamapolisa ngekhamera enxibe umzimba ngezi zibonelelo zilandelayo:
Ukurekhoda ukwenzeka kwezehlo ngokuzithemba ngakumbi: Ezi vidiyo kliphu zinokuphucula uxanduva lwamapolisa kunye nokuthembela koluntu kumapolisa ngenxa yoluhlu olubanzi lweekhamera ezinxibe umzimba okanye iifilimu;
(b) Lungiselela uphando notshutshiso: Amapolisa angasebenzisa i-footage ethathwe yikhamera enxibe umzimba njengobungqina bokuqhubeka kophando. Ukuba amapolisa enza isigqibo sokutshutshisa, iziqwenga ezifanelekileyo zingasetyenziselwa ukunika ubungqina enkundleni;
(c) Ukukhawulezisa ukusonjululwa kwezikhalazo okanye ukumangalela: i-footage ebanjwe yikhamera enxibe umzimba inokunciphisa ukungaboni ngasonye kunye nokukhawulezisa ukusonjululwa kwezikhalazo kwaye isimangalo;
(d) Ukuphelisa ukungavisisani: Iikhamera eziphathwayo ezinxibe umzimba zithathwa njengezinokubambisa kwaye zinokuthintela ngokufanelekileyo ukusebenza ngokuqatha. Xa uluntu lwazi ukuba luyenziwa ifilimu, luhlala luzolile luze kunciphise ukungqubana phakathi kwamapolisa nabantu.
Kwelinye icala, ukusetyenziswa kweekhamera ezinxibe umzimba kunyanzeliso lomthetho nako kutsalane ingqalelo kunye namathandabuzo, kubandakanya:
(a) Amapolisa angakongeza ukusetyenziswa kwamandla kwiimeko ezithile: Ngokophando, kwinkqubo yokusebenzisana kwamapolisa, ukuba amapolisa anengqondo enkulu yokuthatha isigqibo sokuvula nokucima ikhamera enxibe umzimba, okanye andise amapolisa ithuba lokusebenzisa amandla.
(b) Imicimbi yabucala: Okokuqala, kuba amapolisa anengcinga epheleleyo yokuthatha isigqibo sokuba aqale nini na uyeke ukurekhoda, kukho inkxalabo yokuba amagosa asebupoliseni angathatha inani elikhulu lezinto ezingahambelani nolwaphulo-mthetho. Okwesibini, amapolisa anokufota amava abuhlungu amaxhoba olwwaphulo-mthetho kunye nabantu ababandakanyeka kwinkqubo yokuhlangula okanye iingozi ezinekhamera enxibe umzimba ngokuchasene nentando yomfoti. Okokugqibela, kukho iinkxalabo malunga nokusetyenziswa kweekhamera ezinokuhanjiswa ngumzimba ezinokutyeshela amalungelo okanye amalungelo asemthethweni abantu abathile (njengamangqina, abahlohli bemfihlo, amaxhoba, abantu abafuna ukuthatha iimpahla zangaphantsi xa bekhangela, njalo njalo).
(c) Ilungelo lokufumana idatha yobuqu: Ngokomthetho okhuselweyo wedatha yomntu, abantu banokufikelela kwiirekhodi zevidiyo zeekhamera zevidiyo ezinemifanekiso. Njengoko abasemagunyeni kunokufuneka ukuba bagqume imifanekiso engahambelaniyo kwiirekhodi zevidiyo, oku kunganyanzelisa umthwalo olongezelelweyo kumapolisa.
Ukuphendula kwezi nkxalabo zingasentla, kukho "izikhokelo ezicacileyo nezingqongqo" ezilawula ukusetyenziswa kweekhamera eziphathwayo zevidiyo:
(a) Le vidiyo isekwe kumsitho: Ikhamera enxibe umzimba ingasetyenziswa kuphela "kwindawo yokujongana" okanye "kwimeko yoxolo lwentlalo olwenzekileyo okanye olunokwenzeka";
(b) Ukucebisa amaqela ngaphambi kwevidiyo: Amapolisa asebenzisa ikhamera enxibe umzimba kufuneka enxibe iyunifomu kwaye axhome ikhamera enxibe umzimba kule yunifomu. Ayenzeki kwimeko yenjongo, kungenjalo, amapolisa kufuneka azise amaqela kwangaphambili ngaphambi kokuqala ukurekhoda. Ngexesha lenkqubo yokurekhoda, ikhamera yokurekhoda inamathuba ibomvu, kwaye isikrini esibonakaliswe ngaphandle siyakwazisa iqela ukuba liyarekhodwa kwaye liyawubona umfanekiso orekhodiweyo. Xa ipolisa liqala ukurekhoda, kufuneka kuqala libike igama lakhe, ixesha kunye nendawo eza kwenziwa loo mifanekiso bhanyabhanya, kunye nenkcazo yomcimbi orekhodiweyo;
(c) Ukutshabalalisa iiklip zevidiyo ezingabalulekanga kuvavanyo: Iikliphu zevidiyo ezithathwa njengefanelekileyo kolu phando ziguqulwa zaba iikopi ezimbini ze-CD-ROM, enye iza kusetyenziswa njengobungqina kwaye enye iya kusebenza njengekhophi yomsebenzi wophando. Iiklip zevidiyo ezingahambelani kulo naluphi na uphando okanye ubungqina bexabiso ziya kutshatyalaliswa emva kweentsuku ze-31 ukusuka kumhla wokufota; kwaye
(d) Iimfuno zabucala: Ngokwe-Orhente yeDatha yoBucala (yabucala), uluntu linelungelo lokucela ukufikelela kwiinkcukacha zobuqu ezigcinwe ngamapolisa, kubandakanya nevidiyo. Zonke izicelo ezinjalo ziya kwenziwa ngeMigaqo.
Izifundo ezinokuthenjwa azilahleki okwangoku, ezibonisa ukuba ukusetyenziswa kweCams-cams kuzisa iziphumo ezinqwenelekayo zomanyano kunye nabapolitiki.
Ngaphezu kwako konke, iSebe Langaphakathi kunye nemibutho yabasebenzi yamapolisa inethemba lokuba ukusetyenziswa kweecams zomzimba kuya kubonelela nangokhuseleko kumagosa. Ke ngoko, amanye amazwe akwimigca yokuqiqa ayenziwa, apho kusetyenziswe khona ii-Cams zomzimba ukuza kuthi ga ngoku.
Iimpembelelo kubaLindi boKhuseleko besebenzisa iikhamera zomzimba eziLwelwe gqibela ukuguqulwa: Disemba 2nd, 2019 by admin
4705 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje